Mirgi 'waraabbii' eegamuu dhabuun dhiibbaa dinagdeefi xinsammuu geessisaa jira
Mirgi 'waraabbii' eegamuu dhabuun dhiibbaa dinagdeefi xinsammuu geessisaa jira Featured
Biyya kamittuu hojiileen kalaqa sammuu qabeenya guddaa waan ta’aniif, eegumsi barbaachisu yoo godhamneefiin alatti misooma sammuurratti taasifamu kan gufachiisan ta’uu ragaaleen hedduun mul’isu.
Kunis, guddina damee kanaa laamshessuun kufaatii dinagdee kan saffisiisuufi fayyadamtoota ogummaa addaddaafi aartiirratti dhiibbaa guddaa kan geessisu ta’uusaati.
Akka Itoophiyaattis mirgi waraabbii ogummaawwan kanneen akka muuziqaafi artiiwwanii eegamuu dhabuun warreen abbummaa qabanirratti dhiibbaa dinagdeefi xinsammuu geessisaa jiraachuu Waldaan Bulchiinsa Waliinii Mirga Waraabbiifi Fakkaattiisaa ibseera.
Obbo Dassaalany Haayiluu Itti gaafatamaa sabqunnamtii waldichaa yoo ta’an, Itoophiyaa keessatti mirgi waraabbii eegamuu dhabuun sadarkaa yaaddessaarra gahaa jiraachuu dubbatu.
Addunyaarrattis ta’e biyyoota Afrikaa keessatti baroota dheeraaf mirga waraabbiifi hidhatasaaf kaffaltiin tajaajilaa kan raawwatamu ta’uu ibsanii, biyya keenya keessattis waggoota sadii dura labsiitiin mirkanaa’us hanga ammaatti qabatamaatti hojiirra hin oole.
Hojiileen ogummaa marti kaffaltiifi eeyyama tokko malee tajaajila akka kennan godhamaa jiraachuu Obbo Dassaaleny dubbatu. Kunimmoo biyyattii keessatti eegumsi hojii kalaqa sammuuf taasifamu baay’ee gadaanaa ta’uusaa kan mul’isu yoo ta’u, warra abbaa mirgaarratti dhiibbaa dinagdeefi xinsammuu geessisaa akka jiru ibsaniiru.
Kana malees, mirga waraabbii kalaqa sammuufi ogummaawwan sammuutti gufuu ta’uurra darbee wiirtuuwwan fiilmii hedduun akka cufaman sababa ta’uusaa eeraniiru. Rakkoo kana ittisuuf ammoo waldaan waliinii mirga waraabbiifi fakkaattiisaa hundeeffamuu kan yaadatan Obbo Dassaalany, humna namaa guuttachuutiin dhiyeenyatti hojii keessa kan seenamu ta’uu ibsaniiru.
Warreen mirga waraabbii qabanis dhiibbaa isaanirra gahu jalaa miliquufi dawoo argachuun fayyadamummaa isaanii mirkaneeffachuuf kalaqa hojiilee isaanii mara waldichattii galmeessisuu akka qaban yaadachiisaniiru. Kana waliinis dhaabbileen hojiiwwan kalaqa sammuu fayyadaman kanneen akka miidiyaa, hoteelota addaddaa, manneen barnootaafi kkf. abbootii mirgaaf kaffaltii tajaajilaa waggaatti si’a tokko akka raawwataniif hojmaatni kan diriiru ta’uu addeessaniiru.
Kaffaltiin tajaajilaa kunis abbootii mirgaa fayyaduurra darbee mirga waraabbii hanga tokko hanbisuun hanqinaalee damicha keessatti mul’achaa jiran kan fooyyessu ta’uus dubbataniiru.
Akkuma namni kamuu qabeenyisaa yoo saamame seeraan gaafatu qabeenya sammuusaas gaafachuu qaba kan jedhan ammoo Daariktera Waajjira Qabeenya Sammuufi Mirga Waraabbii Obbo Naasir Nuuriidha. Mirgi waraabbii haala barbaadameen eegamuu dhabuunsaa hubannoo gahaa dhabuufi haala walxaxaa guddina teknooloojii waliin walqabatee jiru rakkisaa ta’uusaarraa kan ka’eedhaa, jedhaniiru.
Keessumaa ammoo kalaqni muuziqaafi fiilmiiwwanii osuma hojjetamaa jiranii carraan hatamuusaanii bal’aa waan ta’eef, dhimmicharratti himata dhiyeeffachuuf odeeffannoo ogummaasaanii yoo kennaniyyuu mirga seeraan gaafachuu kan qabu garuu abbootii mirgaa ta’uu himaniiru.
Waajjirrisaaniis hubannoo hawaasaa guddisuuf Finfinnee dabalatee magaalota naannolee addaddaatti leenjii kennaa jiraachuu dubbatanii, baranas Diillaa, Hawaasaa, Adaamaa, Aksumiifi Walaayittaatti eegalameeraa, jedhu.
Mirga waraabbiifi fakkaattisaa eegsisuuf labsiin 410/1996tti bahe hanqinaalee hedduu kan qabu waan tureef bara 2007tti labsii haarawaa baheen fooyya’uu danda’eera. Kanarraa kan ka’e ogeessoti damichaa mirgasaanii eegsisuuf waldaalee 12 hundeessuu danda’aniiru. Mirgi waraabbii eegame jechuun ammoo yaada ofii bilisaan ibsachuuf kan gargaaru ta’uun hiamameera.
Torban kana/This_Week 43577
Guyyaa mara/All_Days 1468357